ရန်ကုန် (FOB) ဈေးနှုန်း
World Metal Price
ရန်ကုန် အိမ်၊ခြံ၊မြေ ကဏ္ဍ
Home » သတင်းများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ »
နိုင်ငံရေး အငြင်းပွားမှုကြောင့် အက်စ်အမ်အီး ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ ထိခိုက်
Thursday,6Feb 2014
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံရေးမတည် မငြိမ်ဖြစ်မှုက ပို့ကုန်ကဏ္ဍမှာဆောင် ရွက်နေကြတဲ့ အသေးစားနဲ့အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် (အက်စ်အမ်အီး) ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ ပို့ကုန်အခွင့်အလမ်း တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင် စောစီးစွာမဖြေ ရှင်းနိုင်ပါက ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း ထိုင်းကုန်သည်ကြီးများ အသင်းတက္ကသိုလ် (UTCC) ကပြုလုပ်တဲ့လေ့လာချက်မှာတွေ့ရတယ်လို့ သည် နေရှင်းသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှ သိရပါတယ်။
ဗီယက်နမ်မှာ စက်ဘီးများ ပြန်လည်ခေတ်စားလာ
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ စက်ဘီးစီးတာ ကပြန်လည်လူကြိုက်များလာပြီး စက် ဘီးဈေးကွက်က ခါတိုင်းထက်အဝယ်ပို လိုက်ခါ အဆွဲကြမ်းလာကြောင်း ဗီယက်နမ်သတင်းအေဂျင်စီရဲ့ သတင်း မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲ မှုသက်သာတဲ့ယာဉ်တွေကို ဗီယက်နမ် ရှိစားသုံးသူတွေက ပိုမိုသဘောကျလာ ကြောင်း ဗီယက်နမ်မော်တော်ကား၊ ဆိုင်ကယ်နဲ့ စက်ဘီးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ငုယင်ဟူဆန်းက ပြောပါတယ်။
ထိုင်းစီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက အွန်လိုင်း ရောင်းဝယ်မှု တိုးမြှင့်ဖို့ စိတ်ဝင်စား
Tuesday, 29 Oct 2013
အာဆီယံ စီးပွားရေး အသိုက် အဝန်း (အေအီးစီ) မပေါ်ပေါက်မီ ကြို တင်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အွန်လိုင်းကုန်သွယ် မှုလုပ်ငန်းကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ဖို့ ထိုင်း စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေတယ် လို့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ထိုင်းလင်းနေရှင်နယ် နယူးသတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗီယက်နမ်မှာ မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်မှုနှုန်း လျှော့ချထား
Monday, 21 Oct 2013
ဗီယက်နမ်မှာ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးသုံးခုက သူတို့ရဲ့ သရီး ဂျီ (တတိယမျိုးဆက်ကွန်ရက်) ဆက်သွယ်မှုအသုံးပြုခကို တိုးမြှင့်ထားပေမဲ့ စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Vietnamobile က သူတို့လို ဈေး တက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ သရီးဂျီဆက်သွယ်မှုစရိတ်တွေကို တိုးမြှင့်ဖို့ လောလောဆယ်မှာ အစီ အစဉ် မရှိတဲ့အတွက် သရီးဂျီဝန်ဆောင်မှုတွေကို အသုံးပြုတဲ့အခါ Vietnamobile ဖောက်သည်တွေ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ သုံးကြဖို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ကိုယ် စားလှယ်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ကိုးလအတွင်း ဗီယက်နမ်ကုန်သွယ်မှု လိုငွေဒေါ်လာ ၁၂၄ သန်းပြ
Monday,7Oct 2013
၂၀၁၃ ခုနှစ် ပထမကိုးလအတွင်း မှာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်ပကုန်သွယ် မှုလိုငွေပြမှုဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၄သန်းရှိခဲ့ရာစုစုပေါင်းပို့ကုန်ရဲ့ သုည ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း အောက် တိုဘာ ၁ ရက်က ဗီယက်နမ် ဗဟို စာရင်းရုံးကထုတ်ပြန်ချက်အရသိရတယ် လို့ရှင်ဝှာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ တင်းကျပ်တဲ့ အလုပ်ခန့်ထားရေးဥပဒေကြောင့် နိုင်ငံခြားသားတွေအခက်တွေ့
စင်ကာပူပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေသူတို့အတွက် အကျိုးစီးပွားကို ပြန်လည်ညှိနှိုင်းထားတဲ့ ဥပဒေကို ရေး ဆွဲပြီးတဲ့နောက် ပြည်ပမှ စင်ကာပူကို လာရောက်လုပ်ကိုင်သူတို့အတွက် ဆုံး ရှုံးမှုတွေရှိလာကြောင်း စထရိတ်တိုင်းမ် သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ယခုနှစ်အတွင်း အလုပ်အကိုင် ပြောင်းလို့ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးအက်ဒ်ဝင် မာကာရိတ်ကြိုးပမ်းတဲ့အခါ Employment Pass (EP) သစ်ရဖို့အတွက် စင် ကာပူအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ငြင်း ပယ်မှုကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ သူကမမျှော်မှန်း ခဲ့ပါဘူး။ နိုင်ငံစုံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ၃၁ နှစ်အ လုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီးတဲ့နောက် အိုင်တီ အမှုဆောင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ သူက အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်(ပီအာ)အ တွက်လျှောက်ထားတဲ့အခါ ယခုနှစ် ဇူ လိုင်မှာတစ်ကြိမ်ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာမှာ တစ်ကြိမ်ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုနှစ်ကြိမ်စလုံးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ work pass အဟောင်း သက်တမ်းကုန်လို့ အသစ်လျှောက်တာ မရတဲ့အတွက် ဖိလစ်ပိုင်သူနဲ့ လက်ထပ် ထားပြီး သမီးနှစ်ယောက်ရထားတဲ့သူက မနီလာကိုပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံသားတွေကို မခန့်ထားမီစင် ကာပူနိုင်ငံသားတွေကို အလုပ်ခန့်ထား ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း စင်ကာပူအလုပ်ရှင် တွေက ပြသရမယ်လို့ စင်ကာပူအလုပ် သမားဝန်ကြီးဌာနက စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်သူ့အတွက် ပိုမိုအခက်ကြုံစေခဲ့ ပါတယ်။ လာမဲ့သြဂုတ်လကစပြီး အလုပ်သ မား ၂၅ ဦးအထက်ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီအား လုံးက ပညာသည်၊ စီမံခန့်ခွဲသူနဲ့ အမှု ဆောင် (PME) ရာထူးနေရာတွေကို ခေါ်ယူခန့်ထားရင် အစိုးရကကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Job Bank မှာ နိုင်ငံ ခြားသားတွေကို မခန့်ထားမီ ၁၄ ရက် ကြိုတင်ကြော်ငြာရမယ်လို့ ကြေညာ ထားပါတယ်။ ဒီပြင်လာမဲ့ဇန်နဝါရီက စပြီး EP လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူတွေ ရဲ့ ကနဦးလစာကိုလည်း စင်ကာပူဒေါ် လာ ၃၀၀၀ ကနေ ၃၃၀၀ အထိတိုးမြှင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ယခုနှစ်အတွင်းမှာ ထိုင်းခရီးသွား လုပ်ငန်းထက်ဝက်ခန့်က အရောင်းကျမည်ဟု ခန့်မှန်း
စားသုံးသူ ဝယ်လိုအားကျဆင်းမှုနဲ့ လူနေမှုစရိတ်မြင့်တက်မှုတို့က ခရီးသွား လုပ်ငန်းကို အားနည်းကျဆင်းစေတဲ့ အတွက် ယခုသုံးလပတ်ကာလအတွင်း စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာ သူတို့ လုပ်ငန်းက ဟီးရိုးသဖွယ်ကယ်တင်နိုင် မဲ့လမ်းမမြင်နိုင်ဟု ခရီးသွားလုပ်ငန်း အော်ပရေတာတွေကမြင်နေကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံသည်နေရှင်းသတင်းမှာ ဖော် ပြထားပါတယ်။
တရုတ်စီးပွားရေးနှေးကွေးမှုကြောင့် စင်ကာပူကုန်သွယ်မှု အလားအလာကို လျှော့ချခန့်မှန်း
Thursday, 22 Aug 2013
ယခင်သုံးလပတ်က စင်ကာပူရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍက စင်ကာပူစီးပွား ရေးတိုးတက်မှုကိုခန့်မှန်းထားတာထက် ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ တရုတ် ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး နှေးကွေးမှုက စင်ကာပူကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဝယ်လို အားကျဆင်းစေခဲ့တဲ့အတွက် စင်ကာပူ နိုင်ငံရဲ့ ယခုနှစ်ပို့ကုန်ခန့်မှန်းချက်ကို လျှော့ချထားကြောင်း ဘလွမ်းဘတ် သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထူထောင်ကြဖို့ ဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီများကို တိုက်တွန်း
သူတို့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ဖို့နဲ့ အမြတ်နှုန်းကိုပိုမိုရရှိ အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ဗီယက်နမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထူထောင်မှုကို ပိုမို ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူများ ကပြောကြောင်း VNS သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဖရန်ချိုက်လုပ်ငန်းတွေ တိုးတက်မည်ဟု ခန့်မှန်း
Wednesday, 31 Jul 2013
အာဆီယံဒေသတွင်းမှာ ထိုင်းနိုင် ငံက လုပ်ငန်းခွဲဝေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ စီးပွားရေး (Franchise Business) လုပ်ငန်းတွေ ယခုနှစ်အတွင်းမှာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်လာမယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးမြှင့် တင်မှုအဖွဲ့ (DITP) ကခန့်မှန်းထား ကြောင်း ထိုင်းနယူးစ်သတင်းမှာ ဖော် ပြထားပါတယ်။
ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ရေအရင်းအမြစ်က စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားပေးနိုင်
မလေးရှားကုန်ပစ္စည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတို့ အရည်အချင်းရှိ ယာဉ်မောင်း အခက်အခဲရှိ
အာရှဒေသတွင် ဝန်ထမ်းကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ်မမှန်မကန် ဖော်ပြမှုမြင့်တက်
ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီ ဘဏ်ကိစ္စအတွက် ဂျာမနီနဲ့ ပြင်သစ်တို့ သဘောထားကွဲလွဲ
iPhone 4S ကြိုတင်အမှာစာ ၂၄ နာရီ အတွင်း တစ်သန်းရှိ
ယူရိုဇုန်အခက်အခဲကို အာရှနိုင်ငံတွေပါ ရင်ဆိုင်နေရ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ခံရသော လုပ်သား သုံးသိန်းကျော် အလုပ်ပြန်ရ
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အလားအလာ ကောင်းနိုင်
Copyright ©2014 The Commerce Journal. All rights reserved.
Powered by Information Matrix